ọhụrụ Ngọngọ Kọmputa sayensị Ihe nkiri
Na-agbasa ozi ọma
ISS: uzo ozo ohuru site n'aka Thomas Pesquet na onye otu ya iji kpoo ogwe igwe
Na ISS, a na-eji nwayọọ nwayọọ etinye ogwe igwe ọhụụ akpọrọ iROSA iji mụbaa mmepụta ume. Onye na-ebu ụgbọ mmiri SpaceX nyefere ha. Wednesdaybọchị Wenezdee gara aga, onye na-aga na mbara igwe bụ Thomas Pesquet na onye ọrụ ibe ya bụ Shane Kimbrough mere njem ohere iji wụnye panti mbụ nke setịpụrụ ọhụr...
Oche osimiri kachasị mma
2021-06-20 -mara ìhè
A ezigbo ochie ejiji oge osimiri oche bụ isi ihe na-a n'ezie jụụ osimiri ụbọchị, ma unsurprisingly, ọ bụghị ihe niile na-kere otu. Ahịa jupụtara na nhọrọ ugbu a, anyị bịara ebe a iji nyere gị aka ikpebi ụdị ejiji dị mma maka gị...
Euro 2020 ọkara ikpeazụ na nke ikpeazụ boris johnson na nsogbu ọhụrụ ahụike ọha
Mịnịsta ala Britain Boris Johnson kwuru na gọọmentị Britain na ndị UEFA, ndị na-achị isi nke egwuregwu bọọlụ Europe, na-enwe mkparịta ụka, ụlọ ndị ezi uche dị na ha gbasara nhazi nke ọkara-ikpeazụ na nke ikpeazụ nke Euro 2020 na Wembley Stadium na London...
Windows 11, olee otu iji nwetaghachi akwụkwọ ahụaja 38 na 4K?
Microsoft na-ekwuwa ọkwa ọhụụ nke Windows a na-akpọ Windows 11. Ihe omume a ga-eme na June 24th. Mgbe ị na-eche, ihihi mmiri ka mere. Nke a bụ otu ị ga-esi nweta akwụkwọ ahụaja Windows 11 dị iche iche. Ọ ga-esiri Microsoft ike idebe ihe niile dị na Windows 11 nzuzo. Faịlụ dị na ajụjụ na-ewere ụdị nk...
Windows 11 dị adị, ọ na - agbanye ya
Asịrị na-agagharị kemgbe ọtụtụ izu maka ụfọdụ Windows 11. Microsoft dị ka ọnụọgụgụ nọmba 11 ahụ, ma na-ekesara ihe niile na-egosi na ịdị adị nke ụdị ọhụrụ a nke Windows, ebe anyị na-akpọ anyị òkù na ihe omume enigmatic. ịbịa na June 24, mana ebe ụfọdụ ndị nwere obi abụọ ka nwere obi abụọ na ịdị adị ...